भरतपुर अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका एक पुरुष कोरोना भाइरसमुक्त, आजै डिस्चार्ज गरिने – Halkhabar kura
१३ बैशाख २०७७, शनिबार ११:१५
भरतपुर अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका एक पुरुष कोरोना भाइरसमुक्त, आजै डिस्चार्ज गरिने
भरतपुर। कोरोना भाइरसको स-ङ्क्र-म-ण देखिएपछि भरतपुर अस्पतालको आइसोलेसनकक्षमा रहेका दुई जनामध्ये २७ वर्षका पुरुष कोरोना भाइरसमुक्त भएका छन्। दुईपटक गरिएको पिसीआर परीक्षणमा कोरोना नेगेटिभ देखिएपछि उनी भाइरसमुक्त भएका हुन्।
उनीसँगै रहेकी आमाको दोस्रो पिसीआर परीक्षण भने पोजेटिभ नै देखिएको छ। अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा श्रीराम तिवारीका अनुसार लगातार दुईपटक गरिएको परीक्षणमा छोराको नेगेटिभ देखिएको हो। उनलाई आज दिउँसो औपचारिकरूपमा डिस्चार्ज र बिदाइ गरिने कार्यक्रम छ।
आमा अस्पतालमा नै रहनुपर्ने भएकाले उनी आमालाई कुर्ने गरी अस्पतालकै छुट्टै क्वारेन्टाइनमा बस्ने वा घरको क्वारेन्टाइनमा बस्ने टुङ्गो नलागेको तिवारीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘उहाँलाई हामी आज दिउँसो औपचारिकरूपमा डिस्चार्ज गरेर क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाउँछौँ।’ कम्तीमा उनी एक साता क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
तिवारीका अनुसार राप्ती नगरपालिका–८ निवासी ६५ वर्षिया आमा र २७ वर्षिय छोरामा कोरोना भाइरस देखिएको थियो। शुरुमा आमामा र्यापिड डायग्नोष्टिक टेष्टमा शङ्कास्पद देखिएपछि आमा र दुई छोराको पिसीआर परीक्षण गरिएको थियो। भरतपुर कोभिड–१९ प्रयोगशालामा आमा र एक छोराको पोजेटिभ देखिएपछि उनीहरुलाई भरतपुर अस्पतालको आइसोलेसनमा निगरानीमा राखिएको छ। भरतपुरबाट स्वाब थप परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाउँदा त्यहाँ पनि नतिजा पोजेटिभ आएको थियो।
परीक्षणअघि आमा र दुई छोरा अस्पतालमा रहेको भए पनि एक जना छोरालाई नेगेटिभ देखिएपछि उनलाई डिस्चार्ज गरिएको थियो। हाल अस्पतालमा रहेका आमा छोरामा रोगको लक्षण नदेखिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार तीन दिनपछि पुनः आमाको स्वाब परीक्षण गरिने छ । शरीरबाट भाइरसमुक्त भए पनि केही समयसम्म एन्टीबडी रहने भएकाले नेगेटिभ देखिएपछि पनि कम्तीमा एक साता क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने चिकित्सकको भनाइ छ।
चैत ३ गते बेलायतबाट यी आमा छोरा हङकङ हुँदै नेपाल आएका हुन्। दुई दिन काठमाडौँ बसेर उनीहरु घर आएका थिए। परिवारका सदस्य, उनीहरुसँग निकट भएका एम्बुलेन्स चालकदेखि अन्य व्यक्तिलाई हाल राप्तीको ब्रह्मनगरको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। र्यापिड डायग्नोष्टिक टेष्टमा सबैको नेगेटिभ देखिएको भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष डा भोजराज अधिकारीले जानकारी दिए।
जिल्लामा कोरोना रोगको उपचारका लागि भरतपुर अस्पताल र भरतपुर महानगरपालिकाले स्थापना गरी भरतपुर अस्पतालले नै सञ्चालन गरेको भरतपुर कोरोना विशेष ९अस्थायी०अस्पताललाई तोकिएको छ। अधिकारीका अनुसार भरतपुर अस्पतालमा रहेका सङ्क्रमितलाई उच्च सावधानीका साथ राखिएकाले अन्य सेवा सञ्चालन भएको छ। –
Previous ओलीका प्रवृत्तिबारे बाबुरामको टिप्पणी: कोरोनाभन्दा खतरनाक ‘ओली प्रवृत्ति’ चिनौं र इतिहासबाटै बिदा गरौं
Next ‘फिक्स’ भएको विवाह यसरी रोकिएको थियो सलमान खानको
‘प्यानडेमिक’ बाट ‘एन्डेमिक’ तिर धकेल्दैछ’ ओमिक्रोन !
३० पुष २०७८, शुक्रबार ०२:५५
जब मन र तन मिलेपछि संसारमै भाइरल , हेर्नुहोस भिडियो
२९ पुष २०७८, बिहीबार १३:२४
बाथरोग कस्तो हो, यसलाई कसरी चिन्ने अनि कसरी बच्न्ने – सुनौं डा. अभिलाषा शाहबाट (भिडियो)
१९ पुष २०७८, सोमबार १७:४१